Kuuriyada Waqooyi oo tiri “Diyaarad-qaadaha USA waa Burburinaynaa!” – Radio Daljir
Kuuriyada Waqooyi oo tiri “Diyaarad-qaadaha USA waa Burburinaynaa!”
Abriil 23, 2017 8:14 g 0
Maanta oo Axad ah Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in burburiso oo hal gantaal oo kaliya ku quusiso markabka wayn ee diyaar-qaadaha USS Carl Vinson ee ku shaqeeya awoodda nukliyeerka. Raxanta uu hugaaminayo diyaarad-qaade Carl Vinson ayaa hadda waxaa kale oo ku soo biiray 2 maraakiibta dagaalka ee dawladda Japan.
Raxantaan maraakiibta ayaa la sheegayaa in ay u shiraacatay galbeedka badda Basifigga. Madaxweyne Kuxigeen Mike Pence ayaa maanta yiri raxantu waxay maalmo gudahood ku imaan doonaan aagga hawlgalka ee biyaha Kuuriya.
Dhanka Kuuriyada Waqooyi, maanta waxay qafaasheen muwaadin kale oo u dhashay USA, taas oo tirada dadka Maraykanka ah ee hadda u xiran ka dhigaysa 3 qof. Muwaadinka oo magiciisa lagu sheegay Kim, kana soojeeda Kuuriya, ayaa dalka u joogay hawlo samafal ah. Markii uu damcay in uu dalka ka tago ayaa laga soo celiyey madaarka Pyongyang.
Barnaamijka Cayaaraha iyo Mustafa Xuseen Yuusuf (Dhegayso)